Raha te-hahalala ny fomba amam-panaovana an'i Amazona ianao amin'ny teny fototra manan-danja anao - dia efa any amin'ny toerana mety ianao. Fantatrao ve fa ny pejy voalohany amin'ny valin'ny fikarohana amin'ny Amazon dia mahazo mihoatra ny 60% amin'ny fikarohana fitadiavana fikarohana avy amin'ny mpividy mivarotra mitady ireo entana amidy any? Noho izany dia midika izany fa ny akaiky anao indrindra eo amin'ny ambaran'ny vokatra amazonin'ny Amazon amin'ny teny fanalahidy tianao sy ny andian-teny lava be dia be - ny mety hahalalanao ny varotra mety ho azonao avy amin'ny. Fa ny fomba hananganana an'i Amazona ho an'ny teny fanalahidy manan-danja, indrindra raha mbola mpivarotra vao manomboka fotsiny ianao maka ny dingana voalohan'ny voalohany ao amin'io tsena tena feno olona io? Ny valiny fohy dia ny fahatakarana ny teny fototra sy ny toetrany manokana hita amin'ny fomba fijerin'ny algorithm. Koa, etsy ambany dia hasehoko anao ny fomba hananganana an'i Amazona - amin'ny famoahana torolalana fohy momba ireo teny fototra fototra ary ny fomba tsara hamantarana azy ireo any.